Abe-Samro bacobelele abaculi ngolwazi | IOL Isolezwe
Abe-Samro bacobelele abaculi ngolwazi
Isolezwe / 18 June 2012, 11:07am /
UNTSIKA Seoka we-Hip Hop Sosha uthi kumele ibe miningi imicimbi yokucobelelana ngolwazi endimeni yomculo. Isithombe: SANDILE MAKHOBA
INTSHA eningi ichazelwe ngokusebenza kwendima yomculo eThekwini ePlayhouse, ngoMgqibelo kaJuni 16. Abantu abasha bebephume ngobuningi babo bezozizwela ngokwenzeka emculweni. Okufike kwahlaluka ukuthi umculo awugcini nje ngokuba sestudiyo kumbe ngokuthi umculi ajabulise abantu esiteji.
Kulo mcimbi bekukhona abantu abebephuma ka-Samro abebekhuluma ngokubhaliswa komculo ukuze waziwe futhi ukhokhelwe ngokudlala kwawo emsakazweni, bebekhona futhi abebemele izinkampani zomculo abafana noNative Rhythms.
Kulo mcimbi ohambe kahle kakhulu, uNtsika Seoka we-hip-hop Sosha, uthe bafisa sengathi izithangami zomculo zalolu hlobo zingahlezi zikhona ngoba bona ziyabakha. “Abantu abaningi abazi ngomculo, lapha sifundiswe konke ngawo, akumele kugcinwe ngeSouth African Music Conference kwazise yona igxila koDJ, lo mcimbi bewamukela wonke umuntu osendimeni yomculo,” kuchaza uNtsika. Kulo mcimbi bekumele kunandise uZakwe kodwa ofike umcimbi sewuphelile kwagcina sekunandisa uDJ Happy Gal.